Man City oo raadineysa cayaaryahano cusub
Home Sports Man City oo raadineysa cayaaryahano cusub
Macalin kooxda Manchester City Roberto Mancini ayaa sheegay marka la gaaro bisha January sannadka na soo aadan, in ay la soo wareegi doonaan ciyaaryahano cusub.
Tababaraha reer Talyaani ayaa aad u raba in uu ka soo dukaameesto suuqa ciyaartoyda Yurub, waayo dhowr ciyaartoy ayaa kooxda ka dhaqaajin doona marka uu furmo koobka qaramada Africa Africa Cup of Nations.
Mar ay saxaafadda weydiisay wajiyada cusub ee uu keeni doono kooxda wuxuu yiri Mancini “Run ahaantii ciyaartoyd badan uma baahnin, mana awoodno ciyaartoyd aaan iibino, waayo maba heyno annaga ayaa u baahan.
Wuu sii hadlay wuxuu kaloo yiri illaa seddax ciyaartoyd ayaan luminay, waxan heynaa kaliye Micah Richards, marka ciyaartoyd waxan sugi karnaa illaa dhammaadka bisha February.
“Jack Rodwell ma ogin in uu awood in uu ciyaaro. Waa suura gal in uu soo kabsado Aleksandar Kolarov labo toddobaad, waxa aan arki doonaa dhowrka maalmood ee soo scoda .”ayuu yiri markale.